India oo sheegtay in khatarta burcadbadeeda ay hoos u dhacday - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka India oo sheegtay in khatarta burcadbadeeda ay hoos u dhacday
India oo sheegtay in khatarta burcadbadeeda ay hoos u dhacday
Ciidanka dowladda india ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka hortageen weeraro badan oo ay kooxaha burcadbadeeda ay soo abaabuleen ayna doonayeen in ay ku afduubtaan maraakiib.
Taliyaha ciidanka badda ee dowladda india u qaabilsan la dagaalanka burcadbadeeda ayaa sheegay in ciidanka dowladda india ay ka hortageen weeraro badan oo ay soo maleegeen kooxaha burcadbadeeda kuwasoo la doonaayey in lagu dhibaato marakiibta ganacsiga ee maraaya xeebaha Soomaaliya.
Admiral Ravneet Singh ayaa sheegay in ciidanka badda ee dowladda India ay hoos u dhigeen khatarta burcadbadeed,waxa uuna sheegay in hada aysan Soomaaliya ka jirin dhibaato burcadbadeednimo.
Weerarada guud ee ay qaadeen kooxaha burcad badeed ayaa lagu sheegay 171 weerar iyadoo sidoo kale in waxyeelo u geysteen ku dhawaad 40 markab sida laga soo xigtay howlgalka Midowga Yurub ee Atlaanta.
Muwaadiniin badan oo u dhashay dalka India ayaa muddo badan afduub ahaan waxaa u heystay kooxaha burcad badeeda,waxaana dowladda India ay ka mid tahay dowladdaha lagu ammaano la dagaalanka burcad badeeda.
Previous articleTaliyihii Qeybta Boliiska gobolka Banaadir oo is casilay
Next articleShip corridor has played key role in tackling piracy: Indian naval official
Dowladda Soomaaliya ayaa horumar ballaaran ka sameysay xaqiijinta himilooyinka ku dhIgan hannaan howleedka loo yaqaan SENDAI (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). Si loo yareeyo...